Norwey oo ka wel welsan in dadka soo galootiga ah ay qaadan waayan Talaalka Covid 19. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Norwey oo ka wel welsan in dadka soo galootiga ah ay qaadan...
Norwey oo ka wel welsan in dadka soo galootiga ah ay qaadan waayan Talaalka Covid 19.
Wasiirka Waxbarashada iyo Is dhexgalka buslahda Guri Melby (V) ayaa sheegtay in ay walaac ka qabto in dadka soo galootiga ah ee ku nool Norwey ay qaadan waayaan Talaalka Karoona Feyrus xili Norwey laga bilaabay qaadashada sedax talaal oo looga hortagayo cudurkaasi.
Machadka Caafimaadka dadweynaha qaranka Norwey ayaa dhawaan labo daraasaad uu sameeyay ku ogaaday in uu jiro shaki badan oo ku aadan qaadashada talaalka kaas oo ay qabaan dadka ajaanibta ah ee norwey ku nool intii lagu guda jiray faafiska Covid 19.
Waxaa jira jawaabo diidmo ah oo ay bixiyeen qaar badan oo kamid ah ajaanibta ku nool wadanka kuwaasi oo la su`aalay in ay qaadanayaan talaalka hadii loo soo bandhigo xili dhawaan warbixin soo baxdey lagu sheegay in ku dhawaad kala bar dadka uu Norwey kaga dhacay Karoona Feyrus ay yihiin dadka soo galootiga ah.
“Dabcan wey I walaacineysa arintaani” ayay tiri Guri Melby.
Guri Melby ayaa arintaani ka dhawaajisay kadib booqasho ay ku tagtay Xafaadda Stovner ee degmada Oslo halkaasi oo ay ku noolyihiin 33,000 ( Sodan iyo sedax kun) oo muhaajiriin ah kadib markii la ogaaday in Stovner ay ka mid tahay goobaha ugu badan ee laga helay cudurkaani marka laga hadlayo xaafadaha kale ee Degmada Oslo.
“Aad ayey muhiim u tahay in waayeelka ku jira dadka soo galootiga ah la tallaalo, si iyagana loo ilaaliyo” ayay ku nuuxnuuxsatay Guri Melby.
Waxa ay intaasi raacisay in sidoo kale loo baahanyahay in la daryeelo caafimaadka iyo bad qabka qofka taas oo lagu gaari karo yareynta infekshinka arintaasi oo ay tilmaamtay in ay muhiim u tahay qaadashada talaalka dadka soo galootiga ah.
Robert Steen oo ka tirsan Golaha caafimaadka ee Oslo ayaa horaantii todobaadkaan Tv2 u sheegay in Stovner ay ka mid tahay meelaha loo baahanyahay in safka hore laga dhigo marka laga hadlayo qaadashada talaalka bulshada.
Guri ayaa Stovner kula kulantay Nasreen Bagum oo ah haweeney wacyo gelin badan u sameysa dadka ajaanibta ah, waxaana ay warbixin wanaagsan ka siisay qaabka ay dadka ugu sameeyaan wacyo gelina ku aadan Covid 19.
Degmooyin dhowr ayaa dhawaan la xiray kadib markii Norwey lagu arkay Coronaveirus-ka is bed bedala ee markiisa ugu horeeyay lagu arkay England, taas oo cabsi badan ku dhalisay madaxda Norwey.
Xigashada warkaani Tv2
Previous article17 jir Soomaali ah oo doonaya in laga doorto Edmonton, Canada?
Next articleGabar Soomaali ah oo ku geeriyootay xero qaxooti oo kutaala dalka Gariiga.